द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | Mar 21, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
एक बुलेट सूची को उपयोग गरीएको को लागी एक टेक्स्ट को पठन योग्यता सुधार गर्न र यसलाई बुझ्नको लागि सजिलो बनाउन। त्यसकारण, यो अक्सर प्रयोग गरिन्छ जब अनुच्छेद धेरै जटिल वा धेरै लामो हुन्छ। यो कसरी यसले तपाईंलाई सर्तहरू, सूची उदाहरणहरू, आदि सूचीबद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ त्यसपछि यसको प्रयोगको समस्या खडा हुन्छ। उचित विराम चिह्न र सबै नियमहरू जुन यो सही ढsert्गले राख्नको लागि खातामा लिनुपर्दछ भनेर जान्नु पर्दछ।
चिप भनेको के हो?
बुलेट प्रतीक हो जसले तपाईंलाई थाहा दिन्छ कि तपाईं एक तत्व वा तत्वहरूको समूहबाट अर्कोमा सर्दै हुनुहुन्छ। हामी बुलेटहरू छुट्याउँछौं जुन नम्बर छन् र अन्य छैन। पहिलेलाई अर्डर बुलेट र दोस्रो अनर्डर्ड बुलेट पनि भनिन्छ।
एक अनअर्डर गरिएको बुलेटेड सूचीमा, प्रत्येक अनुच्छेद बुलेटबाट सुरू हुन्छ। धेरै समय अगाडि चिप ड्यासमा कम गरिएको थियो, तर आज तपाईसँग धेरै डिजाइनहरू छन्, अरु भन्दा केही बढी सन्तुष्ट। क्रमांकित बुलेट सूचीमा, नम्बर वा अक्षरले प्रश्नमा बुलेट अघि पार्नु पर्छ।
सामान्यतया, क्रमांकित बुलेट सूची गणनाको क्रममा जोड दिन प्रयोग गरिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि एक संख्या बुलेटेड सूची सूचिको सूची छ जुन फोल्डर पहुँच गर्नका लागि पूरा हुनुपर्दछ, तपाईं कुनै शर्तको साथ सुरू गर्न सक्नुहुन्न। अर्को तर्फ, जब सूची आदेश छैन, यो मानिन्छ कि सबै तत्व विनिमेय छन्। कहिलेकाँही वर्णमाला क्रम जस्ता चीजहरू तिनीहरूलाई सूचीबद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ।
नियमहरू पालना गर्न
बुलेट सूचीले दृश्य तर्क अनुसरण गर्दछ। तसर्थ, यो हेर्नको लागि रमाईलो हुनुपर्दछ र सबै भन्दा बढि सुसंगत यो अनर्डर्ड गरिएको बुलेट सूचीको लागि पनि सहि छ। स्थिरता विशिष्ट तत्वहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तै एक गणनामा उही प्रकारको बुलेटको प्रयोग, समान विराम चिह्नको प्रयोग र उहि प्रकृतिको बयानको छनौट। वास्तवमा तपाईले अन्य तत्वहरूको लागि अवधि र अरूको लागि अल्पविराम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यो एक कोलोन द्वारा अवरुद्ध भएको घोषणा वाक्यांशको साथ सूची घोषणा गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।
रिड ईमेल को अन्त्य को लागी सही वाक्य छान्नुहोस्, तर तपाइँ कसरी यसको बारे मा जानुहुन्छ?
यो दृश्य कोहोरिको यो तर्कमा सधैं हुन्छ जुन तपाईं फरक प्रकारको वा फरक समयको वाक्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं infinitive मा संज्ञा र क्रिया मिश्रण गर्न सक्नुहुन्न। एउटा चाल भनेको राज्य क्रियाको हानि गर्न कार्य क्रियाको पक्ष लिनु हो।
सही विराम चिह्न
तपाईंसँग धेरै विराम चिह्नहरूको बीचमा छनौट छ। केवल, तपाइँले स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यो यदि प्रत्येक एलिमेन्टको लागि अवधि राख्दछ भने प्रत्येक गणनाको लागि क्यापिटल अक्षर प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईं अल्पविराम वा अर्धविराम छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले प्रत्येक बुलेट पछि लोअरकेस प्रयोग गर्नुपर्छ र अन्तमा एक अवधि राख्नु पर्छ। त्यसैले तपाइँ प्याराग्राफ जारी राख्न नयाँ भाग सुरू गर्नुहोस् वा नयाँ अंश सुरू गर्नुहोस्।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यदि बुलेट गरिएको सूचीले पाठकलाई लामो पाठमा सन्दर्भ गर्न अनुमति दिन्छ भने, केहि नियमहरूको सम्मान नगर्नु असंगत हुनेछ जसको बिना पठनीयता कमजोर हुनेछ।
बुलेटेड सूची र पढ्न योग्यता मार्च 24th, २०२०Tranquillus
अघिल्लोलेखन विधि र पढ्ने विधिहरू
निम्नखारेज र कष्टदायी परिस्थितिहरू: के तपाईंको कर्मचारीले गल्ती जायज छ भने पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्दछ?